Ndị ọkàiwu na-eme mpụ na International na Netherlands - Law & More
Enwere ọtụtụ ọnọdụ ebe iwu mpụ na-ekere òkè na ndụ anyị. Ọ bụ ya mere na mgbe mgbe, anyị na-ezute ya na mberede. Iji maa atụ, inwere ike iche maka ọnọdụ iri mmanya ị oneụbigara mmanya ókè wee kpebiri ịkwọ ụgbọala. Ọ bụrụ na ejide gị mgbe ị alcoholụsịrị mmanya na-aba n'anya ị nwere nsogbu. N'okwu ahụ ị nwere ike ịta ntaramahụhụ ma ọ bụ nweta akwụkwọ ịkpọ oku.
N'AGBAR OF OBI LBỌCHIM?
Enwere ọtụtụ ọnọdụ ebe iwu mpụ na-ekere òkè na ndụ anyị. Ọ bụ ya mere na mgbe mgbe, anyị na-ezute ya na mberede. Iji maa atụ, inwere ike iche maka ọnọdụ iri mmanya ị oneụbigara mmanya ókè wee kpebiri ịkwọ ụgbọala. Ọ bụrụ na ejide gị mgbe ị alcoholụsịrị mmanya na-aba n'anya ị nwere nsogbu. N'okwu ahụ ị nwere ike ịta ntaramahụhụ ma ọ bụ nweta akwụkwọ ịkpọ oku. Ọnọdụ ọzọ a na-ahụkarị bụ n'ihi amaghị ama ma ọ bụ akpachapụghị anya, akpa ndị njem nwere isiokwu amachibidoro nke ezumike na ezumike, ngwongwo ma ọ bụ ego egosipụtara na-ekwesịghị. Na agbanyeghị ihe kpatara ya, nsonaazụ nke omume ndị a nwere ike bụrụ ihe siri ike, ma onye omekome ahụ ga-akwụgo ụgwọ ruru 8,200.
> Imeri n'iwu mpụ
> Iwu mpụ okporo ụzọ
> Criminallọ omekome iwu
Dịka onye ọchụnta ego ma ọ bụ onye isi ụlọ ọrụ nwere ike ị nwekwara ike nweta iwu omekome n'ihi ọnọdụ azụmahịa gị. Nke a nwere ike bụrụ ikpe, mgbe nkwenye sitere n'aka ndị ikike tozuru etozu, a na-enyo ụlọ ọrụ gị enyo wayo ma ọ bụ azụmahịa na-enweghị atụ. Ọzọkwa, isonye na azụmaahịa azụmahịa nwere ike ịkpata mmebi akụ na ụba ma ọ bụ mebie iwu gburugburu ebe obibi nke nwere ike ịbara gị azụmaahịa. Omume dị otú a nwere ike ibute ụlọ ọrụ gị nnukwu ihe ma kpata nnukwu ego. Youchọtara onwe gị n'ụdị ọnọdụ a ka ịchọrọ ozi ndị ọzọ? Biko egbula oge ịkpọtụrụ ndị ọka iwu omekome nke Law & More.
“Ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma
O mere ka nkem zuo oke
obere ụlọ ọrụ. M ga-ike
kwadoro Law & More
banye ụlọ ọrụ ọ bụla
Imeri n'iwu mpụ
O nwekwara ike ime na ị na-enweta iwu mpụ site na 'onye ahụ'. Thesebọchị ndị a anyị na-azụ ihe karịa na ịntanetị. Ọ na - abụkarị ihe niile na - aga nke ọma ma ị nwetara ihe ị nyere iwu. O bu ihe nwute, mgbe ufodu na odighi nma: ugwo otutu ego maka ihe ufodu dika ekwenti ma obu laptop, mana onye n’ere ahia enyebeghi ngwa ahia a n’ebughi ime. E kwuwerị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwa ebe ngwongwo gị dị, onye na-ere ahịa enweghị ebe ọ bụla. N’ọnọdụ ahụ ị nwere ike ịbụ onye eboro mpụ wayo.
N'ọnọdụ ebe ịdabere na iwu mpụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkpọtụrụ onye ọka iwu ọkachamara na Law & More. Omume ọ bụla na ọnọdụ nke iwu mpụ nwere ike ịdị njọ ma ihe omume ndị omekome nwere ike ịgbaso ibe ha ngwa ngwa. Na Law & More Anyị ghọtara na mmebi iwu omekome nwere ike imetụta ndụ gị yana ọ bụ ya mere anyị ji lekwasị anya idozi nsogbu onye ahịa ahụ ngwa ngwa. Ndị ọka iwu ndị omekome na Law & More dị obi ụtọ inye gị nkwado iwu na mpaghara:
• iwu mpụ okporo ụzọ;
• iwu mpụ;
Ọkachamara nke ọka iwu ọka iwu nke Law & More
Iwu mpụ okporo ụzọ
Are boro gị ebubo ịkwọ ụgbọala n'okpuru mmanya na-egbu egbu ma ọ bụ ọgwụ ike? Rịọ maka enyemaka anyị gbasara iwu.
E boro gị ebubo aghụghọ?
Anyị nwere ike ịdụ gị ọdụ
Criminallọ ọrụ omekome iwu
You na etinye ihe gbasara iwu mpụ ụlọ ọrụ n'ihe egwu?
Anyị nwere ike inyere gị aka
Been ghọgburu gị?
Malite usoro ikpe
Dịka onye ọkwọ ụgbọ ala, ị ga-ahapụrịrị omume ọjọọ. Omume dị otú a na-abụkarị mgbe mmanya na-aba n'anya n'okporo ụzọ. Ndị mmadụ na-agbadata n’azụ ụkwụ nke ụgbọala mgbe ha tooụsịrị mmanya nke ukwuu. A na-ejide gị mgbe ị alcoholụ mmanya na-egbu egbu ka ọ bụ ntaramahụhụ ma ọ bụ ọkpụkpọ oku? Mgbe ahụ ọ bụ ihe amamihe dị na ya inye onwe gị onye ọka iwu ọkachamara. E kwuwerị, ịkwọ ụgbọala na-a alcoholụ mmanya na-egbu egbu na-ata ya ahụhụ site na ntaramahụhụ siri ike nke nwere ike iru ọnwa atọ n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ $ 8,300 ma ọ bụ ntaramahụhụ euro XNUMX ma ị nwere ike nwute ịkwọ ụgbọala. Agbanyeghị, enwere ike na oge a na-agba ajụjụ ọnụ ahụ ma ọ bụ n'oge a na-a theụ mmanya na-emebi iwu ndị uwe ojii na ndị isi na-ahụ maka iwu. O nwedịrị ike ịbụ na ule mmanya anaghị enye ihe akaebe ziri ezi ma nwee ike idozi izu oke. N'ọnọdụ ụfọdụ, nkwụcha ahụ ma ọ bụ ịkwụsị ịnya ụgbọ ala anaghị etinye akwụkwọ. Law & More nwere ndị ọka iwu ọkachamara na ngalaba nke iwu omempụ okporo ụzọ ndị nwere obi ụtọ inye gị ndụmọdụ ma ọ bụ nyere gị aka n'usoro ikpe. Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara omume dị ize ndụ na okporo ụzọ na ịnya ụgbọ ala mmanya na anyị okporo ụzọ weebụsaịtị.
You gaa Netherlands, ị gafere omenala. N’oge ahụ, anaghị enye gị ike ibu ihe a machibidoro iwu. Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ndị ọchịchị kọstọm achọpụta ngwongwo amachibidoro n'ihi amaghị gị ma ọ bụ na ejighị gị, ngagharị mmenye nwere ike iso. Obodo amụrụ ma ọ bụ obodo gị enweghị mmetụta na okwu a. O yikarịrị ka ọ bụ nke a na-esokarị bụ ntanetị. Ọ bụrụ n ’ị natara n ezi ma ọ kweghị, ị ga-ajụ ihe a na Ọrụ Ndị Ọrụ Ikpe Ọchịchị na Dutch n’izu abụọ. Ọ bụrụ n ’ịkwụchaa ụgwọ ahụ ozugbo, ị ga-eme nkwuputa ụgwọ. Nke a bụ ihe mere o ji dị mkpa ibu ụzọ gakwuru onye ọka iwu gbasara ọnọdụ gị. Ndị otu ndị ọka iwu anyị nwetara ọmarịcha ọkachamara ma nwee ike inye ndụmọdụ ma duzie gị na usoro ọ bụla. Need chọrọ enyemaka ma ọ bụ nwee ajụjụ ọ bụla ọzọ? Biko kpọtụrụ Law & More. Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ihe ọghọm na nsonaazụ nke iburu ngwongwo ndị a machibidoro iwu na blọọgụ anyị: 'Omenala Dutch'.
Criminallọ omekome iwu
Ugbu a, ụlọ ọrụ na-agbasiwanye ike na iwu mpụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike bụrụ na enyo ụlọ ọrụ gị enyo enwetara ụtụ ego ezighi ezi ma ọ bụ nke na-emebi iwu gburugburu. Ihe ndị dị otú ahụ dị mgbagwoju anya ma nwee ike ibute nsonaazụ dị ukwuu, ma nke onwe ya ma azụmahịa. N'ụdị ụdị a, ọ dị mkpa ịgakwuru onye ọka iwu ngwa ngwa. Ọkachamara onye ọka iwu ga-akọwapụta ọrụ gị naanị, dị ka ọrụ inye ndị nwe ụtụ isi ozi, mana hụkwa na ikike gị (dịka ụlọ ọrụ) nwere, dị ka ikike ịgbachi nkịtị, anaghị emebi. You na-emeso iwu mpụ dịka ụlọ ọrụ ma ịchọrọ ndụmọdụ ma ọ bụ enyemaka iwu na ọnọdụ gị? You nwere ike ịtụkwasị obi Law & More. Ndị ọkachamara anyị nwere ụzọ ọkachamara ma mara otu ha nwere ike isi nyere gị aka n'ihu.
N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ enwere ike ịda gị mba, dịka ọmụmaatụ, mgbe ịzụtara ngwongwo na ịntanetị, kwụọ ụgwọ ego maka ya ma ị nwetaghị ya, na-enweghị njirimara iwu nke ojoro nke omempụ. Iji nwee ike ikwu na ojoro bụ mpụ n'echiche nke iwu, a ga-enwerịrị ụgha ma ọ bụ ụgha nke onye rere ya na-ere ihe. A kọwara scam n'ụzọ iwu dịka ịkwaga onye ọzọ iji nyefee ego na ngwongwo, n’ebughị ebumnuche ịnapụta ihe ọ bụla. Chọ ịmata ihe anyị ga - emere gị? Kpọtụrụ ndị ọka iwu anyị. Law & MoreNdị ọka iwu nwere ụzọ ha si eme ma chọpụta ọnọdụ gị na nhọrọ gị.
Mgbe ahụ kpọtụrụ anyị site na ekwentị +31 (0) 40 369 06 80 nke stuur een e-mail naar: